အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ………. – Shwe Naung
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……….
N N | October 20, 2021 | Celebrity | No Comments
မော်ဒယ်၊မင်းသမီးလေး တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း ကတော့ ဒီကနေ့ မှာ သူမ ရဲ့ ကျစ်လစ် တဲ့ ဘော်ဒီ အလှ နဲ့ ပရိသတ် တွေရဲ့ အ ကြည့်တွေ ကို ဖမ်းစား လိုက် ပြန်ပါ ပြီ ဗီဒီယို လေး ကို တင်ပေး လာတာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဗီဒီယို လေးတွေ တိုင်း က ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ နဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း နေတာ ကြောင့် ချစ်ရ တဲ့ ပရိသတ် တွေ ကြည့်ရှု ပြီး ပြန်လည် တင်ဆက် ပေးလိုက် ပါတယ် နော်။
ပိုစ့် ဆန်းဆန်းလေးတွေ နဲ့ ဓါတ်ပုံ ရိုက်တတ် တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း ကတော့ ခပ်ဆန်းဆန်း ဓါတ်ပုံ လေးတွေ ကြောင့် ပရိသတ် တွေ ကြားမှာ ကျော်ကြား လာသူ လေး ပါ။
ပရိသတ် ကြီး ရေ အသား အရည် ဖြူဖွေး ဝင်းမွတ် ပြီး မြင်သူ ငေးရတဲ့ အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဖက်ရှင် မော်ဒယ်လ် နွယ်နွယ်ထွန်းက တော့ ပုရိသပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေး ဝန်းရံ ခြင်း ကို အပြည့် အဝ ရရှိထား တဲ့ သူလေး ပါနော်။
နွယ်နွယ်ထွန်း က ချစ်စရာ ကောင်းပြီး အပြစ်ကင်း စင် တဲ့ မျက်နှာလေး အပြင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်း တဲ့ တောင်းတင်း လှပ ပြီး အချိုး အစား ပြေပြစ် တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ကြောင့် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေ သာမကပဲ မိန်းကလေး အချင်းချင်း ကပါ အားကျ နေရတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။
တစ်သား တည်း ရပ်တည်ကာ ( ၂၂၂၂၂ ) မှာ ကိုယ်တိုင် ပါ၀င်ခဲ့တဲ့ လုလုအောင်…
အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် သင်းရတီခင်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ………..